Wararka Dibadda – Page 10 – Shabakadda Amiirnuur
Daacish oo Xaqiijisay Dilka Hogaamyahoodii Iyo Kaaliyihiisii.
War rasmi ah oo kasoo baxay Ururka Daacish ayuu ku xaqiijiyay in weerar ka dhacay dalka Suuriya lagu dilay hoggaamiyihii Ururka iyo kaaliyihiisi ahaana Afhayeenkii Ururka. Farriin cod ah oo Daacish ay ku baahisay baraha Internetka ayay ku sheegtay in ladilay Abuubakar Al Baqdaadi oo muddo sanada ah Ururka hoggaamiye […]
Sacad Al-Xariiri oo ahaa ra’iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu is casilay, kadib banaanbaxyo mudooyinkii u dambeeyey ka socday wadankaas, kuwaas oo looga soo horjeedo madaxda wadanka iyo Siyaasiyiinta. Shir Jaraa’id oo uu Al-Xariiri ku qabtay guriga uu ka deganyahay magaalada Beyruut oo ah caasimadda wadanka Lubnaan ayuu si […]
4 Askari Maraykan ah Oo lagu dilay Afqaanistaan.
Wararka ka imaanaya wadanka Afqaanistaan ayaa ku waramaya inuu dhacay weerar culus oo ciidamo Maraykan ah lagu qaaday, kaas oo dhaliyay khasaare isuga jira dhimasho iyo dhaawac. Ciidamo katirsan Dhaalibaan ayaa weerar kamiin ah u dhigay ciidamo isuga jira Maraykan iyo kuwa xukuumadda Kaabul, xilli ay marayeen meel u dhow […]
Weerar lagu qaaday Masjid ku yaala koonfurta wadanka Faransiiska.
Wararka ka imaanaya koonfurta Faransiska ayaa ku waramaya in weerar hubeysan lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Baywan ee koonfurta wadankaas, kaas oo dhaliyay wayxeello gaartay dadka Muslimiinta ah. Weerarka ayaa masjidka lagu qaaday xilli ay dad Muslimiin ah ku cibaadeysanayeen, waxaana fuliyay nin hubeysan oo xagjir ah, islamarkaana ay […]
Mareykanka oo Sheegtay Inuu Suuriya Ku Dilay Hogaamiyiha Daacish.
Hogaamiyaha Mareykanka ninka lagu magacaabo Donald Trump ayaa oo maanta shir jaraa’id ku qabtay aqalka looga taliyo dalkiisa ayaa waxa uu sheegay in hawl gal ciidamadiisu ay ka fuliyeen wadanka Suuriya uu ku dilay hogaamiyaha Daacish Abuu Bakar Baqdaadi. Wuxuu sheegay in weerarku uu ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka […]
War Saxaafadeed cinwaan looga dhigay “Soomaaliya waa dhul Muslim ah, waxaana maamuli doona Islaamka oo kaliya” oo kasoo baxay maktabka Warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kuna qornaa Luuqada English-ka ayaa looga hadlay weerarkii duqeynta aha barak ee dhawaan ay Mujaahidiintu ku qaadeen Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, oo ah taliska […]
Maqaallo Wararka Dibadda Wararka Gudaha
NEWYORK TIMES: Sarkaal katirsan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka oo u dhintay Dhaawac kasoo gaaray Soomaaliya.
Warbixin dheer oo uu qoray wargeyska Newyork Times oo kamid ah wargeysyada uga afka dheer ee kasoo baxa Maraykanka ayaa lagu xaqiijiyay geerida sarkaal katirsan ciidamada Maraykanka sida gaarka ah u tababaran ee ka howlgala wadanka Soomaaliya, kaas oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar kaga yimid dhanka Xarakada Mujaahidiinta […]
Zeynul Caabidinkii Tuunis Oo Geeriyooday.
Qoyska madaxweynihii hore ee wadanka Tuunis Zeynul Caabidiin bin Cali ayaa ku dhawaaqay inuu ku geeriyooday magaalada Jeddah ee dhulka Aala-Sucuud ka arrimiyo, halkaas oo sanadihii u dambeeyey uu ku noolaa. Qareenka Zeynul Caabidiin ayaa sheegay in bilihii ugu dambeeyey uu ninkan aad u xanuunsanayay, islamarkaana uu ku jiray xaalad […]
Howlgal Nafhurnimo oo ka dhacay koonfurta Afqaanistaan.
Wararka ka imaanaya dalka Afqaanistaan ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee manata oo Khamiis ah uu dhacay weerar weyn oo nafhurnimo ah, kaas oo lagu qaaday xarun ay deganyihiin sirdoonka xukuumadda Kaabul. Weerarka oo loo adeegsaday gaari weyn oo miineysan, islamarkaana uu kaxeynayo naftii hure katirsan Dhaalibaan ayaa lagu […]